Warbixin Cusub oo ka hadleysa Xasuuq ay Ciidamo Somali ah ka geysteen Gobolka Tigray (Akhriso) - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis. Warbixin Cusub oo ka hadleysa Xasuuq ay Ciidamo Somali ah ka geysteen Gobolka Tigray (Akhriso) - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
Warbixin cuusb oo uu qoray wargeyska “The Globe and Mail” ee kasoo baxa dalka Canada ayaa soo shac bixisay xasuuq la sheegay ianu ciidamo Soomaali ah oo la socday kuwa Eritrea ka geysteen Gobolka Tigray ee Waqooyiga Itoobiya bilowgii dagaalka.
Warbixinta ayaa soo xigatay marqaatiyeyaal Tigray u dhashay oo ku sugnaa magaalooyinka ay tacadiyada ka geysteen Soomaalida ee la socday kuwa Eritrea, sida ay da ku gowareen goobo Kaniisado ah.
Markhaatiyaasha uu wargeyska la hadlay waxaa ka mida nin 52 jir ah oo magaciisa lagu soo koobay Gebretsadik, kaasoo sheegay inuu daggan yahay xaafadda Zebangedena ee ku taalla waqooyiga-bari ee gobolka Tigray.
Gebretsadik ayaa intaas ku daray: “Ciidamada Soomaalida oo qabsaday xaafaddeyda ayaa si gaar ah u bartilmaameedsaday kaniisadaha waxayna laayeen baadariyaasha. Way gowraceen.” Ciidanka Soomaalida iyo Ereitrea ayaa xaafaddaas ku sugnaa ilaa dabayaaqadii bishii February, sida uu sheegay ninkan ka midka ah dadka deegaanka.
Warbixinta wargeyska The Globe and Mail ayaa inteeda badan ku dhisan dad la qariyey magacyadooda iyo xog uu bixiyey nin sarkaal ahaa, iyadoo aan soo bandhigin caddeyn lagu xaqiijin karo arrintan oo muddo sanad ka badan la hadal hayey, laakiin aan weli loo helin caddeyn buuxda.
Waxaa warbixinta Wargeyska ku jira in cidiimada Soomaaliya ee tegay Gobolka Tigray ay tiradoodu ahayd 10,000 skari, taaso oah mid xaqiiqada ka fog.
Bartamihii sanadkii 2021-kii, warbixin ka soo baxday Hay’adda Xuquuqda Addanaha u qaabilsan Qaramada Midoobey ayaa lagu sheegay in ciidamo ka socday Soomaaliya oo tababar ku qaadanayay saldhig militari oo ku yaalla Eritrea in ay ku biireen dagaalka Tigray oo khasaare badan dhaliyay.
Previous articleProf. Cabdi Ismaciil: “Rooble wuxuu noqday Omicron Covid-19 oo ka darran Covid-kii Farmaajo..”
Next articleWuxuu Qoraalku marag-fur u yahay in talada dalka ku koobnayd Fahad iyo Famaajo (Fal-celin)